Taa geerada ba rashada – Bildung und Teilhabe
Kani sidoo kale waxaa ku jira taageerada meerinta/barashadamanhajka ka baxsan.
H eshay faa’idada sida waafaqsan Buugga II ee Sozialgesetzbuch (SGB II), Buugga XII ee Sozialgesetzbuch (SGB XII – Xeerka Caymiska Bulshada Jarmalka) ama Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG – Sharciga Faa’idada Magangalya Doonka), faa’idooyinka guriyeynta (Wohngeld) ama faa’idooyinka carruurta (Kinderzuschlag).
Waa maxay taageerada meerinta/barashada manhajka ka baxsan?
Mararka qaar ardayda way ku adkaataa barashada maadada, iyo fasaladooda kadib ee baaritaanada fasalka wuu liitaa. Haddii waxqabadka sharciga uu sii socdo, kadib kaarka wargelinta laga yaabo in aysan ku filnaanin. Tani waxaa laga yaabaa in ay ka hortagto codsashada qarashaadka meerinta ee la siinayo shaqada socota ee adkaanta barashadaan iyo taageero ku haboon. Sharuuda hore waa mida in dugsiga xaqiijiyo sharuuda taageerada, ku taliyo meerinta oo aanan jirin bixinta dugsiga u dhiganto ee ka jirto ama ku fillan. Casharada meerinta waxay suurtogal ku tahay labo maado, oo labo saacadood isbuucii, oo waqtiga kicitaanka illaa sameynta kaarka wargelinta xigta.
Sidee ayay tan u shaqeysa?
Ugu dambeynta markii fasalka ku jiro kaarka wargelinta uu si niyad jab ah u liito (4, 5 ama 6), iyo codsiga waa in loo gudbiyaa qarashaadka meerinta ee la bixinayo. Si middaan loo sameeyo, si sahlan u qaad MACH MIT : : Nachhilfe & Durchblick (Meernta iyo aragtiyada) : : oomka “Komm – Mach mit” jeega-buuga, iyo, buuxi bogga hore ee codsiga. Weydii dugsiga in uu buuxiyo bogga gadaal ee codsiga, sababtoo ah qiyaasta macalimiinta/dugsiga sidoo kale waa looga baahanyahay codsiga. Sida ku saleysan qiimeyntaan, maamulka ayaa go’aansada sida ku saleysan aasaaska bixinta ee la xiriiro abaalmarinta faa’idada. Haddii qabyo qoraalka heshiiska ku haboonaato taageerada meerinta ama barashada marhore jirtay, kadib tani waxaa lagu tixgelinayaa ogolaanshaha iyo taageerada shaqada way bilaaban kartaa. Haddii waaladiinta aysan weli helin suurtogalka fursad ku fillan, kadib go’aan ayaa la gaari karaa ee ogeysiinta.
Heshiiska waxaa la gudbiyay marklii dambe, qarashaad ku haboon ee ku fillan iyo meerinta loo baahanyahay waxaa qaabilo Pro Arbeit. Lacag bixinta si toos ah ayaa loogu bixiyaa bixiyaha adeega.
Haddii dhibaatada barashada aan lagu daaweyn karin heerka la ansixiyay, kadib fadlan samey codsi cusub.
Goorm ayaa taageerada meerinta/barashada aan la ansixin?
Haddii dugsiga uusan xaqiijin muhiimada, ama heerka wax qabadka wuxuu ka wanaagsanyahay ku qanacsananaata.
Haddii liidashada wax qabadka aysan ku sababeynin maqnaansho maalmo aan laga cudur daaran ama dhaqan xumo joogto ah ee ardayga.
Haddii tallada nooca dugsi wanaagsan si gaar ah loo go'aansaday.